दार्जिलिङपछि काठमाडौंमै 'लभ स्टेशन' ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
दार्जिलिङपछि काठमाडौंमै ‘लभ स्टेशन’ !
काठमाडौ । चलचित्र लिली विलीबाट लोकप्रियता हाँसिल गरेका जोडी प्रदीप खडका र जसिता गुरुङ अभिनित अर्को चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को यतीबेला काठमाडौंमा छायाँकन भईरहेको छ । यो चलचित्रको दुई ओटा गीत बाहेकको बाँकी छायाँकन तिहार अघि नै काठमाडौंमा सकिँदैछ ।